လျှပ်စစ်ကား (နှင့်အားသွင်းစက်များ) သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်။ • musanews
မိတ်ကပ်မပါဘဲလှပသော Naomi Watts
Liam Payne နှင့် Maya Henry တို့သည်လန်ဒန်ရှိ Versace တွင်
အိန်ဂျလီနာဂျိုလီသည်သူမ၏စာအုပ်ကို LA ၌တင်ဆက်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း ပုံ လျှပ်စစ်ကား (နှင့်အားသွင်းစက်များ) သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်။
Desirè Matani လိ့
ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီမိတ်ကပ်၊ မျက်လုံးမြှားမိတ်ကပ်၊ စင်ကြယ်သောအသားအရေရှိသောကာမဂုဏ်ခံစားနိုင်သောဥရောပအမျိုးသမီးငယ်၏လှပသောပုံတူ။ Retro အလှအပစတိုင်
လျှပ်စစ်ကားကိုသုံးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ ကျနော်တို့စိတ်ကူးကိုသဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာအားပြန်သွင်းရမယ်ဆိုတာငါတို့မသိဘူး။ ဒီမှာပါ။ ဤအတောအတွင်း Europ Assistance သည်လျှပ်စစ်သယ်ဆောင်နိုင်မှုအသစ်ကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများအတွက်အထူးရည်ရွယ်ထားသောစီမံကိန်းတစ်ခုအားစတင်ခြင်းအားဖြင့်စီမံကိန်းကိုစတင်ခြင်းအားဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ယဉ်ကျေးမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ကတိက ၀ တ်ကိုပိုမိုခိုင်မာစေကြောင်းသိရခြင်းကကောင်းသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Europ Assistance ကွန်ယက်ကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအားသုံးမော်တော်ယာဉ်များနှင့်လုံခြုံစွာလည်ပတ်ရန်နှင့်လျှပ်စစ်နှင့်ဟိုက်ဘရစ်ကားများ၏အဓိကကားထုတ်လုပ်သူများ၏ရည်ညွှန်းမိတ်ဖက်ဖြစ်လာခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သောလမ်းကြောင်းသည်အရေးကြီးသောအချက်နှစ်ချက်ကိုထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ သက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးစင်တာများအတွင်းရှိလျှပ်စစ်အားသွင်းကော်လံများ၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်နှင့်ရေယာဉ်တွင်လျှပ်စစ်ယာဉ်များကိုအပြည့်အဝမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်အငှားဝန်ဆောင်မှုအားဖြည့်ခြင်းသည်ရွေ့လျားမှုကိုကူညီရာတွင် ဦး ဆောင်သောကုမ္ပဏီမှစတင်ခဲ့သောစီမံကိန်းအသစ်များဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံး Europ Assistance charging station ၏ဖွင့်ပွဲကိုအီတလီမော်တော်ကားလုပ်ငန်း၏မြို့တော်တူရင်အနီးရှိ Venaria Reale တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်ဝေသော ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အကုန်တွင်စုစုပေါင်းအားသွင်းသည့်နေရာ ၂၅၀ ကျော်အားစုစုပေါင်း ၉၁ လုံးကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျယ်ပြန့်စွာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့်နေရာများအတွက်ဖောက်သည်များအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှု၊ တာယာစစ်ဆေးခြင်း၊
Europ Assistance ဖောက်သည်များသာမက Centers ကို ၀ င်ရောက်သောသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ပါ ၀ င်သည့်အားသွင်းစက်များမှာအမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိသည်။ အမြန်နှုန်း ၂ ခုပါ ၀ င်သည် (၂၂ kW ပါဝါ) နှင့်အမြန်နှုန်း ၃ ခုပါဝါ (၅၅ ကီလိုဝပ်) ရှိသည်။ ဤကော်လံအား credit ကတ်သို့မဟုတ် RFID ကတ်သို့မဟုတ် App မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ App ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ ကော်လံများကို geolocate ပြုလုပ်နိုင်ပြီးပြန်လည်အားဖြည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း Europ အထောက်အပံ့သည်နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီး e-mobility ပံ့ပိုးသူအဖြစ်၎င်းင်း၏ဖောက်သည်များအားသီးသန့်နှုန်းထားများဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းရှိအများပြည်သူအားပြန်လည်အားသွင်းရန်နေရာထောင်ပေါင်းများစွာအပါအ ၀ င်အများပြည်သူအားပြန်လည်သယ်ယူနိုင်သောနေရာများသို့ဆက်သွယ်ပေးသည်။ အီတလီပိုင်နက်။
ဤအရေးကြီးသောစီမံကိန်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ Vai ကားငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု h24 တိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တန့်သွားပါက Europ Assistance ဆက်နွှယ်သည့်စင်တာများရှိသုံးစွဲသူများအားလုံးသို့ခရီးသွားရန်ဖောက်သည်များအားလုံးကိုရည်ရွယ်သည်။ ၂ ဝ ၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင်ရေယာဉ်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဟိုက်ဘရစ်ကားများအပြင်မျိုးဆက်သစ်လျှပ်စစ်ကားအလုံး ၁၀၀ ကို ၂ ဝ ၂၁ အကုန်တွင်ထပ်မံထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ Fiat နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို Europ တွင်ပါ ၀ င်သူများထဲတွင်ထိပ်တန်းစံနမူနာအဖြစ်ပြခဲ့သည်။ "လျှပ်စစ်စင်းကို" ကိုကူညီခြင်း၊ လျှပ်စစ် ၅၀၀ ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးမော်ဒယ်လ်ကိုအီတလီနိုင်ငံထုတ်လုပ်သူ၏သမိုင်းတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး လျှပ်စစ်ကား (နှင့်အားသွင်းစက်များ) သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်။ အပေါ်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ဟန်ရှိသည် Vogue Italia.
ယခင်ဆောင်းပါးတုန်ခါမှုပြား - မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်ဤလေ့ကျင့်ခန်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံး
နောက်ဆောင်းပါးဆံပင်အခြောက်ခံစက်၊ ဆံပင်ကောက်ကောက်နှင့်အသုံးအဆောင်များကို ၃၀% ပိုမိုအသုံးပြုသည်
ဆက်စပ်ဆောင်းပါးများတူညီတဲ့စာရေးသူ BY ဆောင်းပါးများ
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း - အလုပ်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းခြင်းကိုသတိပြုပါ။
House of Gucci သည် Lady Gaga နှင့် Adam Driver တို့မျှော်လင့်ထားသောရုပ်ရှင်၏ပထမဆုံး trailer ဖြစ်သည်
Raffaella, Carràmba! ဘယ်လောက်ထိုးလိုက်တာလဲ
BANANA ပန့်ကက် သခွားမွှေးနှင့်သံလွင်ဆီမပါသောသက်သတ်လွတ်စားနည်း | ...
Miss Magdula နဲ့မိုင်ယာမီကိုသွားကြစို့။
အကြမ်းဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်ခြင်း - ရူပဗေဒနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးနည်းနာများ
မင်းရဲ့ဗီရိုကို ၀ ယ်ပါ။ ငါတို့ ၀ ယ်တဲ့အဝတ်အစားကိုဘယ်လိုအသစ်လဲ
14ပြီလ 2020, XNUMX
သတို့သမီးမိတ်ကပ် 2017, အားလုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်သတင်း!
အောက်တိုဘာလ 28, 2017